सूचना/प्रविधि Archives - Khula Patra
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङका दुर्गम गाउँहरुमा टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । टेलिफोन सेवाबाट बन्चित रहँदै आएका फक्ताङलुङ गाउँपालिका र मिक्वाखोला गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तिका नागरिकलाई लक्षित गरि टावर निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढेको हो । भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम मानि...
काठमाडौँ । १९ नोभेम्बर अर्थात् ३ मंसिरमा पाँच सय ८० वर्षपछिको दुर्लभ चन्द्रग्रहण देखिँदैछ । यो आंशिक चन्द्रग्रहण हो । खगोलविद्हरूका अनुसार १८ फेब्रुअरी १४४० मा यस्तै चन्द्रग्रहण लागेको थियो । र, अब ८ फेब्रुअरी २६६९ मा मात्र यस्तो चन्द्रग्रहण देखिनेछ । भारतको एमपी बिडला प्लेनेटोरियमका रिसर्च एन...
काठमाडौँ । विज्ञान र प्रविधिको उपजको रुपमा रहेको सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको दैनिकी नै बनेको छ । सकारात्मक काममा लागि बनाइएका त्यस्ता सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । पछिल्ला दिनमा त्यही सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अनेकन प्रकारका ठगी धन्दासमेत भइरहेको छ । विशेषगरी सामाजिक तथा आर्थ...
काठमाडौँ । सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले आज आयोजना गरेको ‘अनलाइन टिभी, (युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाल) र अनलाइन मिडियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने’ विषयक अन्तरक्रियामा सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालाले नियमन र निर्देशनसँगै मिडिया...
रियलमीले नेपाली बजारमा रियल मी ८ सार्वजनिक गरेको छ । यो मध्यम रेन्जको नम्बर सिरिज हो । ३ वर्षको अवधिमा ६ वटा जेनेरेसन अपग्रेड र ३ करोड ३० लाख बिक्रीका साथ यो मोबाइल फोनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट सिरिजका रुपमा देखा परेको छ । रियलमी ८ उत्कृष्ट विकासका साथ ६४ एमपी सेन्सर र नयाँ ट्रेन्ड सेटिङ फिचरहरुका सा...
साढे २ करोड नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा
काठमाडौं । नेपालमा साढे दुई करोड जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुुगेकोे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठ महिना (गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दुई करोड ६३ लाख ५६ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको हो ।...
लामो समयदेखि ट्विटर, फेसबुकबाट वञ्चित अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल खोलेका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनताका हिंसा बढाउने पोस्ट गरेको आरोप लगाउँदै, ट्विटर, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले उनका ‘अकाउन्ट’मा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसयता आफ्नै प्लेट...
काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणको प्रस्तावानुसार गत...
काठमाडौँ । कोभिड-१९ बाट बच्ने उपाय उल्लेख भएका कलर रिङब्याक टोन (सीआरबीटी) टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले हटाएका छन्। निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त कम्पनीले कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएदेखि नै सीआरबीटी हटाइएको थियो। त्यसयता म्यासेज प्रवाह मात्र बाँक...
२० हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने ओपो फोनका यस्तो छ विशेषता
२० हजार भन्दा कम मूल्यका ओपो फोन किन्न चाहनु हुन्छ? तपाईंले उत्कृष्ट फिचर्सको ओपो फोन बजारमा सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। चिनियाँ ब्रान्ड ओपोका ती फोनहरू क्रमशः ए१–के, ए३–एस र ए५–एस हुन्। कम्पनीका अनुसार यी फोनमा नयाँ प्रविधि जडान गरिएको छ। हेरौं यी फोनका फिचर्सहरू ए१–के यस फोनमा वाटर ड्रप स्...
नेपालमा पालमा पहिलोपटक युरेनियम बरामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोलीले बिहीबार साढे २ किलो युरेनियम बरामद गरेको हो । आखिर के हो त युरेनियम ? धर्तीभित्र एउटा यस्तो चीन पाइन्छ, जो देख्नमा अत्यन्त सुन्दर, सफा र चमकदार छ र हावाको सम्पर्कमा आउनासाथ स्वयम् जल...
काठमाडौँ । नेपालमा २ करोड ४७ लाख ३५ हजार जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांकअुनसार मंसिर मसान्तका तुलनामा पुस महिनामा ३ लाख ८८ हजार बढी प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। मंसिरमा कूल २ करोड ४३ लाख ४७ हजार १५७ जनाको...
गत बिहीबार नासाको अन्तरिक्ष यान ‘रोभर पर्सिभेरेन्स’ सुरक्षित अवतरण गर्‍यो । यो यानले मंगल ग्रहमा जीवनको खोजी गर्नेछ । मंगल ग्रह अहिले सबैजसो खगोलशास्त्री र अन्तरिक्ष अभियन्ताका लागि चासोको केन्द्रमा छ । नासाले सन् १९९० देखि मंगल ग्रहबारे अध्ययन थालेको हो । संयुक्त अरब इमिरेटस् र चीनका अन्तरिक्ष य...
एकैपटक धेरैलाई एसएमएस कसरी गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार एकैपटक धेरै नम्बरमा एसएमएस पठाउनका लागि सुविधालाई अझ फराकिलो बनाएको बताएको छ । टेलिकमले विभिन्न संघ–संस्था, कार्यालय वा संगठित संस्थाहरु तथा व्यक्तिले एकै पटक धेरै मोबाइल नम्बरमा एउटै सन्देश (एसएमएस) पठाउनु पर्ने आवश्यकता हुनसक्ने भन्दै यसलाई सम...
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ताबि...
मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले व्यवसाय र रोजगारी खुम्चिरहेको बेला मोबाइल व्यापार भने चम्किएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च भएकै बेला मोबाइल हेन्डसेटको आयात गत वर्षभन्दा दोब्बर भएको हो। भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा मुलुकमा २० अर्ब ६३ करोडभन्द...
काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगलाई व्यापकता गराउँदै सरकारले नयाँ एप्सको विकास र नमूना परीक्षण शुरु गरेको छ । उक्त एप्समा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकको...
काठमाडौँ । विगत डेढ दशकको समय नियाल्ने हो भने प्रविधिले हाम्रो जीवनमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । त्यतिबेला कम्प्युटर, ल्यापटपसमेत देख्न मुश्किल पर्नेहरू अहिले हरेक क्षण च्याटिङ गर्ने, भिडियो कल गर्ने, ईमेल पठाउने लगायत इन्टरनेटसँग सम्बन्धित गतिविधिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । अहिले मानिस घ...
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो बग बाउन्टी प्लेटफर्म ‘बगभी’ सार्वजनिक भएको छ । साइनिकल टेक्नोलोजीले साइबर सुरक्षा सेवा सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमै पहिलो पटक यस्तो प्लेटफर्म ल्याएको हो । यससँगै अब विश्वभरका एथिकल ह्याकर तथा राइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताले बगभीमार्फत विभिन्न कम्पनीको सिस...
सन् १६१० मा खगोलशास्त्री ग्यालिलियो गेलिलीले बृहस्पति गृहका चार वटा चन्द्रमा पत्ता लगाए । आईओ, युरोपा, ग्यानिमेट र क्यालिस्टो नाम गरेका यी चन्द्रामालाई उनले पहिलो पटक देखे । खगोल विज्ञानमा यी चन्द्रमालाई ग्यालिलियोका चन्द्रमा पनि भन्ने गरिन्छ । सोही वर्ष उनले शनि ग्रहको 'रिङ' पनि पत्ता लगाए ।...
पछिल्लो समय फाइबर इन्टरनेट एकदमै लोकप्रिय छ। केही वर्ष अगाडिसम्म सीमित ब्रान्डब्यान्ड कनेक्सन मात्र फाइबर उत्कृष्ट थिए । अर्थात् वायरलेस, वाइम्याक्सको प्रयोग गरिन्थ्यो वा सामान्य इन्टरनेट केबल (तार) को माध्यमबाट प्रयोगकर्तासम्म इन्टरनेट पुर्‍याइन्थ्यो । तर, अहिले फाइबर इन्टरनेटको माग बढ्दै गइ...
काठमाडौँ । फेसबुकको म्यासेन्जर र इन्स्टाग्राममा विश्वभर नै समस्या देखिएको छ । दुवै कम्पनीले यसको कारण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । फेसबुकको म्यासेन्जर ‘सर्भर’सँग कनेक्ट नहुने र म्यासेज निक्कै ढिला मात्रै आउने–जाने समस्या देखिएको छ । यस्तै, इन्स्टाग्राममा पनि म्यासेज नजाने समस्या देखिएको छ । यस्त...
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विद्यालय तहका सबै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिमकार्ड तत्काल वितरण गर्न नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन अनलाईनमार्फत् सञ्चालन हुने गरी विद...
एजेन्सी । एकाधिकार कायम गरेको भन्दै अमेरिका सरकारले गुगुलमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गरी इन्टरनेटमा हुने खोजी र अनलाइन विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गरेको आरोपसहित अमेरिकाले गुगलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । एक वर्ष भन्दा बढीको अनुसन्धानपछि अमेरिकाको न्याय विभाग ...
अमेरिकी अन्तरिक्ष वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पहिलो पाइला (पहिलो मानव पाइला) टेकेको इतिहास धेरै पुरानो भइसकेको छ । अपोलो– ११ अन्तरिक्ष यानमा सवार आर्मस्ट्रङले २० जुलाई १९६९ मा चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए । आर्मस्ट्रङको त्यो सफलतापछि विकसित राष्ट्रहरूका वैज्ञानिक हौसिए । उनीहरूले लगातार च...
कम्प्युटर जस्तै काम गर्ने ग्यालेक्सी नोट २० र नोट २० अल्ट्राको नेपाली मूल्य कति ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विक्री भइरहेका सामसङ ग्यालेक्सी नोट २० र नोट २० अल्ट्रा स्मार्ट फोन काम गर्न र गेम खेल्न लोकप्रिय भएका छन् । भदौ तेस्रो हप्तामात्र नेपाली बजारमा आएको ग्यालेक्सी नोट २० सिरिजका मोबाइलले कम्प्युटर जस्तै काम गर्न सक्ने र प्रो गेमहरु सहजै खेल्न सकिने कम्पनीले बताएको छ। नोट प...
काठमाडौं । सामाजिक संजाल नयाँ फिचर ‘फेसबुक अवतार’ जारी गरेको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, युरोप र क्यानाडा र भारतपछि अब नेपालमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ । फीचरको मद्दतले युजर्सले अपनाउने कार्टुनिस्ट क्यारेक्टर सिर्जना गर्न सकिन्छ । च्याटमा देखिने यो फिचर स्न्यापच्याटमा बिटमोजी र...
कराँची । सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने देशहरुको सूचीमा पाकिस्तान पनि थपिएको छ । चिनियाँ एप टिकटकलाई यसअघि भारत, अमेरिकालगायतका देशहरुले प्रतिवन्ध लगाइसकेकोमा शुक्रबारदेखि पाकिस्तानले पनि प्रतिवन्ध लगाएको हो । ‘अनैतिक सामग्रीहरु’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै पाकिस्तानले शुक्रबारदेखि टिकटकलाई देश...
खुल्यो डिभी, भर्ने हैन ?
काठमाडौै । सन् २०२२ को डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) बुधबार रातिबाट खुल्ने भएको छ। नेपाली समय अनुसार २०२२ को डिभी भिसाको आवेदन आज राति ९:४५ बाट खुला हुने भएको हो। डिभी भर्ने अन्तिम म्याद कार्तिक २५ गते नेपाली समय अनुसार रातको १०:४५ बजे बन्द हुनेछ। डिभी भर्न के–के चाहिन्छ ? डिभी भर्न कुनै शुल्क लाग्दै...
काठमाडौं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनकालागि नयाँ वेभपोर्टल ‘राष्ट्रिय नवप्रवर्तन विद्युतीय सञ्जाल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोभिड-१९ को प्रतिकार गर्न आवश्यक प्रविधिको विकासकालगि नवप्रवर्तकहरुको पहिचान, तथ्यांक संकलन र प्रदर्शनकालागि नाष्टले न...
काठमाडौ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले ‘युवा वैज्ञानिक फोरम’ स्थापना गरेको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवपं्रवर्तनको क्षेत्रमा युवाहरुलाई सहयोग, सहकार्य र प्रोत्साहन गर्नकालागि राष्ट्रियस्तरको साझा फोरम स्थापना गरिएको हो । नाष्टले सन् २०१८ मै फोरमको स्थापना गरेको थियो । दुई ...
चितवन । दुवै मिर्गौला फेल भएका चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ चैवुङका १९ वर्षीया शर्मिला गुरुङको उपचारका लागि रु ११ लाख ८५ हजार रकम सङ्कलन भएको छ । सामाजिक अभियानकर्मी कृष्ण घोताने गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको आह्वानबाटै उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । देश विदेशमा रहेका ११७ व्यक्ति तथा स...
गुगलको नयाँ फिचर : कसले किन फोन गर्‍यो भन्ने पहिले नै थाहा पाइन्छ
प्रविधिको बढ्दो विकासका बीच गुगलले नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ । अब गुगलले थर्ड पार्टी एपविना नै कसले फोन गर्‍यो भनेर जानकारी दिने एप ल्याएको छ । ‘भेरिफाइड कल्स’ नाम दिइएको गुगल फोन एपमा अब फोन गर्नुपूर्व कसले फोन गरेको हो भनेर देखाउनेछ । यसअघि ट्युन कलर नामक एपले पनि यस्तै सुविधा दिएको थियो ।...
नाष्टले ‘यन्त्र मानव’ प्रयोगमा ल्याउने
काठमाडौँ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले छिट्टै यन्त्र मानव अर्थात रोबोट प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न नाष्टले आफ्नो कार्यालयमा उक्त प्रविधि निर्माण गरेर जडान गर्न लागेको हो । कार्यालयमा आगन्तुक पस्दा ...
यो साइन्स फिक्सनको कुनै दृश्यजस्तो देखिन्छ । अमेरिकाको एयरफोर्स प्लेनबाट निस्किएर चारखुुट्टे रोबोटिक कुकुर मोजाभे मरुभूमीस्थित एयरफिल्डमा कुद्न थाल्छ । यसले भविष्यमा हुने युद्धको सम्भावित झल्को दिन्छ । तर, गत साता सम्पन्न अमेरिकी सेनाको अहिलेसम्मकै उच्च प्रविधिको प्रयोग कुनै सिनेमाको दृश्य होइन । ...
काठमाडौँ । खगोलशास्त्रीले शुक्र ग्रहको वायुमण्डलमा एक प्रकारको ग्यास फेला पारेका छन्, जसले त्यहाँ जीवन रहेको देखाउँछ। शुक्र ग्रहको बादलमा केही सूक्ष्म जीव तैरिरहेको हुनसक्ने संकेत पाइएको खगोलशास्त्रीले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भेटिएको ग्यासको नाम फस्फिन हो, जुन फस्फोरसको कण र तीन हाइड्रोजनक...
काठमाडौा । लोकप्रिय चिनियाँ भिडियो–सेयरिङ एप्लीकेसन टिकटकले आफ्नो अमेरिका व्यवसाय अमेरिकी कम्पनी ओराकललाई बिक्री गर्ने संकेत दिएको छ । टिकटकको अमेरिका व्यवसाय खरिद गर्ने बारेमा माइक्रोसफ्टसँग लामो वार्ता भए पनि अन्ततः त्यो पहल समाप्त भएको माइक्रोसफ्टले जनाएको छ। माइक्रोसफ्टले आइतबार एक विज्ञप...
एजेन्सी । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दैनिक नयाँ विकास भइरहेको छ । यस्ता विकासले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । हालै जापानका अनुसन्धाताले एक विद्युतीय बाइक बनाएका छन् । उक्त बाइक अरु बाइकका तुलनामा भने फरक छ । अनुसन्धाताको एक टिमले पट्याएर भिर्ने झोलामा राख्न मिल्ने बाइक बनाएका हुन् । पोर्टे...
आज हामी इतिहासका केही त्यस्ता महान् मस्तिष्कलाई सम्झदैँछौ, जसको खोज र आविष्कारले विश्वलाई बदल्न र आजको अवस्थासम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । आज हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि र सेवासुविधा यी र यस्ता मस्तिष्कहरुको खोजकै जगमा उभिएको छ । को थिए त त्यस्ता अद्भूत मस्तिष्क भएका इतिहासका महापु...
मेसेन्जरबाट अब पाँचजनालाई मात्रै म्यासेज फरवार्ड गर्न सकिने
ह्वाट्सएप पछि फेसबुकले पनि मेसेन्जरमा सिमित मेसेज फरवार्ड गर्न सकिने फिचर्स बनाएको छ। कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित र प्राइभेट मेसेजिङको सुविधाको लागि यो कदम चालिएको हो। यसले गलत जानकारी, झुठा समाचार र हानिकारक सामाग्रीहरुलाई कम गर्ने फेसबुकको विश्वास छ। यो फिचरसँगै अब मेसेन्जरमा ...
नेपालीले बनाए स्मार्टफोन माइक्राेस्काेप: झाडापखाला गराउने परजीवी माेबाइलबाटै पत्ता लाग्ने
काठमाडौँ । अहिले स्मार्टफोनबाट गर्ने कामको सूची लामो भइसकेको छ। अनगिन्ती कामहरु मोबाइलबाटै गर्ने चलन सुरु भएको छ। फोन गर्न, मेसेज पठाउन, फोटो खिच्न, अडियो भिडियो रेकर्ड गर्न, इमेल पठाउन, समाचार पढ्न, सामाजिक सञ्जाल लगायत इन्टरनेट चलाउन, समय हेर्न, वा अन्य यस्तै थुप्रै काम एउटै मोबाइल सेटबाट गर्...
यी उत्कृष्ट पाँच स्मार्टफोन तपाईंले खरिद गर्न सक्नुहुन्न
काठमाडौं । समय कति चाँडाे परिवर्तन हुन्छ । १० वर्ष अघिसम्म तपाईंले प्रयोग गर्ने फोनको मोडल र फिचरको समय आज गुज्रिसकेको छ । पातलो आकारको हलुको मोडल आजको फोनहरुको मापदण्ड हो । क्वाड क्यामेरा, फास्ट चार्जिङ, शक्तिशाली प्रोसेसर र यस्ता धेरै फीचरहरु मात्र आजका स्मार्टफोनमा अटाउन सक्छन् । यी त हाम्...
(सम्पादकीय नोटः यो लेख हामीले 'द गार्डियन' बाट भावानुवाद गरेका हौं। गार्डियन टिमले ओपनएआई कम्पनीको भाषासम्बन्धी काम गर्ने 'जिपिटी-३' रोबोटलाई एउटा लेख लेख्न लगाएका थिए। उनीहरूले 'मान्छे किन रोबोटसँग डराउनु पर्दैन' भन्ने विषय दिँदै यसलाई सामान्य भाषामा प्रस्तुत गर्न भनेका थिए। उक्त रोबोटले यस विषयमा...
काठमाडौं । कोरोना महामारीको बेला अनलाइन माध्यममार्फत कक्षा सञ्चालनको लागि सस्तो मूल्यमा डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकम र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गजाइजेशन नेपाल प्याब्सनबीच सम्झौता भएको छ । कम्पनी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच भदौ ८ गते सम्झौता भएर देशभरका विश्वविद्यालय, आङ्गिक क्याम्पस तथा स...
काठमाडौँ । टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोकप्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लोकप्रियता छ महिनायता झन् बढ्दो छ । ‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने रमाइलो माध्यम पनि बन्यो । यसको लोकप्रियता त्यसयता चुलिएको छ । टिकटकको चुलिँदो लोकप्रियताले नेपालको इन्ट...
खोप नआउँदासम्म कोरोना महामारी अन्त्य हुने सम्भावना नरहेकाले सधैं लडकडाउन/निषेधाज्ञा लगाएर साध्य नहुने जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। यसैले लडकडाउन/निषेधाज्ञा हटाएर सतर्कता अपनाई जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने उनको माग छ। उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत दिएका सुझाव यस्ता छन् : जनजीवन सहज बनाऔ...
ग्लोबल इनोभेसनमा नेपाल ९५ औँ स्थानमा, न्युन आय भएका देशमध्ये तेश्रो
काठमाडौँ । नानो स्याटलाइटमार्फत अन्तरिक्षमा उपस्थिति जनाएकै वर्ष नेपालले ‘ग्लोबल इनोभेटिभ इन्डेक्स (जीआईआई)’ मा सुधार ल्याएको छ । हालै सार्वजनिक जीआईआई–२०२० को रिपोर्टअनुसार नेपाल ९५ औँ स्थानमा परेको छ । विश्वका १३१ देशमध्ये नेपालले अघिल्लो वर्षको भन्दा १४ स्थान माथि उक्लिएर ९५ औं स्थानमा परेको हो...
अल्बर्ट आइन्स्टाइन: बोधो र मन्दबुद्धि भनिएका बालकले यसरी मच्चाए तहल्का
संसारका सबैभन्दा चर्चित वैज्ञानिकको नाम हो– अल्बर्ट आइन्स्टाइन । तर सुन्दा वा पढ्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ– संसारले महान् भनी मानेका, विश्वप्रसिद्ध पत्रिका टाइमले बीसौं शताब्दी मानव नै घोषणा गरेका यी वैज्ञानिक भने सानोमा मन्दबुद्धिका थिए । हो, साँच्चै नै सानो छँदा आइन्स्टाइन बोधो दिमागका थिए । ...